Native Speaker လိုပြောနိုင်ဖို့ collocations တွေ လေ့လာကြမယ် -
Posted on December 14, 2018 December 14, 2018 Author Myat Moe	Comment(0)
Collocations (စကားလုံးတွဲတွေ) ဆိုတာ စကားလုံး (၂)လုံး (သို့) (၃)လုံးထက် ပိုတဲ့ စကားလုံးတွဲတွေကို ခေါ်တာပါ။ Collocations ဆိုလို့ သိပ်လန့်မသွားနဲ့ဦးနော်။ သူက ယောင်းတို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Noun, verb, adjective, adverb, preposition စတာတွေကို ပေါင်းစပ်ထားတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဆိုပြီး တွေ့ရာစကားလုံးနဲ့ တွဲလိုက်လို့တော့ မရပါဘူးနော်… ဘယ်လိုတွဲလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ လေ့လာရင်း collocations က ယောင်းတို့နဲ့ မစိမ်းတာကို သိလာပါလိမ့်မယ်နော်။
(1) Adverb + Adjective
=>Happily married – ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လက်ထပ်ကြသည်
=> fully aware – ကောင်းစွာသိသည်
=> deeply worried – အလွန်စိတ်ပူသည်
(2) Adjective + Noun
=> Bright color – အရောင်တောက်တောက်
She always wears bright colors.
=> brief chat – အကြမ်းဖျဉ်းပြောခြင်း
We hadabrief chat about the project.
=> big brother – အစ်ကိုအကြီး
Jake is my big brother.
(3) Noun + Noun
=>around of applause – လက်ခုပ်သြဘာတစ်ချီ
=> bar of soap – ဆပ်ပြာတောင့်
I’d like to buy two bars of soap.
=> departure time -ထွက်ခွာချိန်
(4) Noun + Verb
=> economy boom – စီးပွားရေးတိုးတက်သည်
=> company grow – ကုမ္ပဏီကြီးလာသည်
=> company expand – ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းချဲ့သည်
(5) Verb + Noun
=> launch the production – ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်လုပ်သည်
They launched the production in 1998.
=> create opportunities – အခွင့်လမ်းများဖန်တီးပေးသည်
The internet has created the opportunities for his company.
=> do business – လုပ်ငန်းလုပ်သည်
I’d like to do business with you.
(6) Verb + Preposition
=> work for (….. မှာ အလုပ်လုပ်သည်)
=> apologize for (….. အတွက် တောင်းပန်သည်)
=> ask after – သာကြောင်းမာကြောင်းမေးသည်
Related article >>> အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ကောင်းစေမယ့် Tongue Twister များ
(7) Verb + Noun
=> improve steadily – မှန်မှန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်
His work is improving steadily.
=> place gently – ညင်ညင်သာသာထားသည်
She placed the beautiful jar gently on the table.
=> whisper softly – တိုးတိုးလေးပြောသည်
He whispered softly to Clare.
(8) Noun + Preposition
=> reason for – အကြောင်းရင်းက
=> responsibility for – တာဝန်ရှိသည်
=> fear of – ကြောက်ရွံ့သည်
His fear of flight made travel difficult.
(9) Adjective + Preposition
=> famous for (…. ကြောင့် နာမည်ကြီးသည်)
The town is famous for its food.
=> good at (…. မှာ တော်သည်)
=> comfortable in (…. နဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိသည်)
ကဲ ဒီလိုမျိုး တွဲပုံတွဲနည်းလေးတွေကို ခွဲခြမ်းလေ့လာကြည့်လိုက်တော့ မျက်စိထဲ ပိုမြင်သွားမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ Collocations တွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် များများလေ့လာပြီး ပြန်အသုံးချဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့နော်။ ဒါမှ ယောင်းတို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားက Native Speaker တစ်ယောက်လို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Collocations တွေ များများသိလာတဲ့အခါကျတော့ ဝါကျတည်ဆောက်တဲ့အခါ မြန်မာလိုတစ်ဆင့်ခံ စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘဲ တိုက်ရိုက် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေ တန်းစီကျလာမှာပါ။ ဒါကြောင့် များများမှန်မှန် လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
<<< Unicdoe >>>
ဘာလဲ Collocations ဆိုရငျတော့… ယောငျးတို့သိပွီးသားတှပေါပဲလို့… 😛
Collocations (စကားလုံးတှဲတှေ) ဆိုတာ စကားလုံး (၂)လုံး (သို့) (၃)လုံးထကျ ပိုတဲ့ စကားလုံးတှဲတှကေို ချေါတာပါ။ Collocations ဆိုလို့ သိပျလနျ့မသှားနဲ့ဦးနျော။ သူက ယောငျးတို့သိပွီးသားဖွဈတဲ့ Noun, verb, adjective, adverb, preposition စတာတှကေို ပေါငျးစပျထားတာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ စကားလုံးအဓိပ်ပာယျတူတယျဆိုပွီး တှရေ့ာစကားလုံးနဲ့ တှဲလိုကျလို့တော့ မရပါဘူးနျော… ဘယျလိုတှဲလဲဆိုတာကိုတော့ အောကျမှာ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။ လလေ့ာရငျး collocations က ယောငျးတို့နဲ့ မစိမျးတာကို သိလာပါလိမျ့မယျနျော။
=>Happily married – ပြျောပြျောရှငျရှငျ လကျထပျကွသညျ
=> fully aware – ကောငျးစှာသိသညျ
=> deeply worried – အလှနျစိတျပူသညျ
=> Bright color – အရောငျတောကျတောကျ
=> brief chat – အကွမျးဖဉျြးပွောခွငျး
=> big brother – အဈကိုအကွီး
=>around of applause – လကျခုပျသွဘာတဈခြီ
=> bar of soap – ဆပျပွာတောငျ့
=> departure time -ထှကျခှာခြိနျ
=> economy boom – စီးပှားရေးတိုးတကျသညျ
=> company grow – ကုမ်ပဏီကွီးလာသညျ
The company has grown and now employed over 30 people.
=> company expand – ကုမ်ပဏီလုပျငနျးခြဲ့သညျ
=> launch the production – ထုတျလုပျမှုကို စတငျလုပျသညျ
=> create opportunities – အခှငျ့လမျးမြားဖနျတီးပေးသညျ
=> do business – လုပျငနျးလုပျသညျ
=> work for (….. မှာ အလုပျလုပျသညျ)
=> apologize for (….. အတှကျ တောငျးပနျသညျ)
=> ask after – သာကွောငျးမာကွောငျးမေးသညျ
=> improve steadily – မှနျမှနျတိုးတကျကောငျးမှနျလာသညျ
=> place gently – ညငျညငျသာသာထားသညျ
She placed the beautifully jar gently on the table.
=> whisper softly – တိုးတိုးလေးပွောသညျ
=> reason for – အကွောငျးရငျးက
=> responsibility for – တာဝနျရှိသညျ
=> fear of – ကွောကျရှံ့သညျ
=> famous for (…. ကွောငျ့ နာမညျကွီးသညျ)
=> good at (…. မှာ တျောသညျ)
=> comfortable in (…. နဲ့ သကျတောငျ့သကျသာရှိသညျ)
ကဲ ဒီလိုမြိုး တှဲပုံတှဲနညျးလေးတှကေို ခှဲခွမျးလလေ့ာကွညျ့လိုကျတော့ မကျြစိထဲ ပိုမွငျသှားမယျထငျပါတယျနျော။ Collocations တှကေို ဖွဈနိုငျရငျ မြားမြားလလေ့ာပွီး ပွနျအသုံးခဖြို့လညျး မမပေ့ါနဲ့နျော။ ဒါမှ ယောငျးတို့ရဲ့ အင်ျဂလိပျစကားက Native Speaker တဈယောကျလို မှနျမှနျကနျကနျနဲ့ ပွောနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ Collocations တှေ မြားမြားသိလာတဲ့အခါကတြော့ ဝါကတြညျဆောကျတဲ့အခါ မွနျမာလိုတဆငျ့ခံ စဉျးစားစရာမလိုတော့ဘဲ တိုကျရိုကျ အင်ျဂလိပျစကားလုံးတှေ တနျးစီကလြာမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ မြားမြားမှနျမှနျ လလေ့ာဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
Tagged Collocations, English, Learn, Learning English, Sunday English, Usage
Posted on September 13, 2017 September 18, 2017 Author Khine
Posted on September 21, 2018 September 21, 2018 Author ကျေးကျေး
Social Enterprise ဆိုတဲ့ လူမှုစီးပွားရေးဆိုတာ….
လေကြေဆေးရည်ဟာ ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သလား?